Umthandazo kugqirha womntwana Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ugqirha ongumntwana okwaziwa ngokuba ngumntwana ongcwele, ngokweCawe yamaKatolika, umele uYesu Kristu ebuntwaneni bakhe bonke; Kunyaka we-1.200 kulapho okokuqala uSanta Francis wase-Assisi, ophetheyo ekubuyiseni ukuzalwa kukaYesu, uyakufezekisa ngomkhumbi owenziwe ngokufana okuninzi kwindawo yokuqala awayezalwa kuyo eBhetelehem. Ngesi sizathu, abantu abalandela inkolo yamaKatolika banomdla wokwazi i umthandazo kugqirha womntwana nayo yonke imbali yayo; Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga noku, siyakumema ukuba ufunde eli nqaku.
Yazi yonke into malunga nomntwana kaThixo
1 Umthandazo kugqirha womntwana kunye nazo zonke iinyani ezinomdla malunga nebali lakhe
2 Amabali malunga nogqirha womntwana
3 Ihlabathi loGqirha woMntwana
4 IColombia kunye noGqirha woMntwana okanye uMntwana oNgcwele
5 Umthandazo kuGqirha woMntwana
Umthandazo kugqirha womntwana kunye nazo zonke iinyani ezinomdla malunga nebali lakhe
Lo mthandazo ubukhona iminyaka emininzi, nkqu nabantu abalandela inkolo bahlala bezinikele kumntwana kaThixo okanye kugqirha womntwana. Ubuntwana bukaYesu Krestu buqwalaselwa yinkolo yamaKatolika njengomboniso wobumsulwa kwaye ngaphezu kwako konke ububele obuninzi; kungoko ukubaluleka okunikwe kuyo kule minyaka idlulileyo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili kunyaka i-1.200 i-Saint Francis yase-Assisi yathatha isigqibo sokuhlonipha i IKrismesi, ngokusebenzisa umkhombe; apho iinkcukacha zibekwe khona, zazimele wonke umboniso owenzeka kwaseBhetelehem ngokuzalwa kukaYesu Krestu. Ngesi sizathu, ukubhiyozelwa kwabelusi, iinkomo, iigusha kunye needonki kwenziwa kubusuku bobusuku; Ukongeza, wayephethe ukwenza intetho enkulu yenkolo ukuhlonipha konke ukulunga kukaYesu Krestu kwaye ke asisindise sonke kwizono zethu.
Amabali malunga nogqirha womntwana
I-San Antonio de Padua okanye ikwadume njenge San Antonio de Lisboa, wayengumbingeleli we-Franciscan, umshumayeli kananjalo, ngumfundi wezakwalizwi wase-Portugal; Ngenxa yalo lonke ulwazi nemisebenzi yakhe, wazithatha njengongcwele nogqirha weCawa yamaKatolika; Ngesi sizathu, umntwana ovela kuThixo ubonakala kuye, xa wayesenza imisebenzi yefriya kwaye egumbini lakhe ethandaza njengoko wayeqhele ukwenza. Emva kwexesha, uya kufunda ngakumbi malunga neli phawu libaluleke kakhulu kubuKatolika.
Enye imeko enomdla ivela kuSan Cayetano owayengumfundisi wase-Itali, ukongeza koku wayephethe umsebenzi wokudala iOrder of Theatine Clerics Rhoqo. Umnyhadala owawubonisiwe yayikukufunyanwa kwimifanekiso kunye nosana olunguYesu okanye umntwana ongcwele, ezandleni zakhe; Ngenjongo yokwenza zonke izicelo zibeke ukufaneleka kubuntwana bukaYesu Krestu.
Namhlanje, emva kwazo zonke iziganeko ezenzekileyo kule minyaka idlulileyo, kufunyenwe ukuba abangcwele abancede ukuzinikela emntwaneni uYesu okanye ugqirha ongumntwana bafikelela kubo bonke abantu yayinguSanta Teresa noSan Juan.emnqamlezweni.
USanta Teresa de Jesús, wabonisa uthando olukhulu ngogqirha womntwana, kangangokuba ngenye imini xa wayekhwela ileli, kwabonakala umbono; apho wayenokumjonga khona umntwana kaThixo, njengokuba wayeziphatha emhlabeni. Emva kwesi siganeko, uSanta Teresa waphatha kunye nomfanekiso omncinci woMntwana oyiNgcwele; Ngapha koko, ucebise kuluntu luphela ukuba nabo benze njalo kwaye kufanele kusoloko kukho umfanekiso wakhe emakhayeni abo; wayehlala esenza esi sipho ngokwakhe, ukuqinisekisa ukuba siya kuhlonitshwa.
Umntwana ongcwele okanye ugqirha womntwana
Ihlabathi loGqirha woMntwana
Ngokuhamba kweminyaka, ukuzinikela kugqirha ongumntwana kuye kwanda; kwaye yasasazeka ngokukhawuleza kulo lonke elaseYurophu, eMelika, eAsia, eAfrika nkqu naseOceania. Ngamnye wabalandeli unamava amangalisayo xa esenza izicelo phambi koYesu wosana kwaye zizalisekisiwe.
Ehlabathini lonke maninzi amanani amele usana olunguYesu kwaye ngamnye wale mifanekiso unoxanduva lwemimangaliso ethile kubemi abayithandayo. Ukukunika uluvo lolona lwaziwayo, sizishiya apha ngezantsi: ECzechoslovakia Niño Jesús de Praga, Santo Niño de Atocha eMexico, iDivino Niño de Arenzano e-Itali naseColombia yaziwa ngokuba yiNiño Jesús de Bogotá engummangaliso. .
Igama awaziwa ngalo uYesu Kristu ebuntwaneni bakhe lixhomekeke kakhulu kule ndawo sibhekisa kuyo; nangona kunjalo, imimangaliso kunye nezicelo ziphulaphulwa ngokulinganayo nguye. Ngokwendawo ohlala kuyo, unokukhetha ukumelwa kweGqirha loMntwana elilungele amasiko akho.
IColombia kunye noGqirha woMntwana okanye uMntwana oNgcwele
Iinkolelo zalo mfanekiso umeleyo kaYesu Krestu ebuntwaneni bakhe elizweni, zavela ngonyaka we-1912 akunakwenzeka, oku kungenxa yokufika kukaJuan del Rizzo umbingeleli omkhulu wemvelaphi yase-Italiya owayengowoluntu lwaseSalesian kwaye wayezinikele kakhulu Usana olunguYesu lwasePrague. Kuqala ngalo mzuzu ukuba lonke ihlelo liqale eBarranquilla. Nangona kunjalo, kamva kwi-1935, umphathi waloo ndawo wenza isiphakamiso sokuba igama liguqulwe kwi-Divino Niño Jesús kuphela, ngaloo ndlela kuthintelwe nayiphi na ingxaki kwingingqi yaseKarmeli ngenxa yamalungelo akhethekileyo.
Ukongeza kuloo nto, ukuthintela ngokupheleleyo ukungqubana okunokuthi kuveliswe ngumfanekiso, isigqibo sithathwa kwaye kwenye yeendibano zocweyo zemveli nezenkolo zaseBogotá kwenziwa umfanekiso omtsha ophuculweyo. Ngumntu owahlukileyo oneenkcukacha ezithile zommandla, kwaye ngenxa yesi sizathu, sasasazeka kwilizwe liphela ngoJulayi 20.
Ukuze wazi okuncinci malunga nalo mthandazo umhle kwaye ungummangaliso, nanga amabinzana amelwe kakhulu, onokuthi uchonge ngawo okanye wandise umdla wokubazi ngokweenkcukacha.
Owu mntwana oyingcwele, usikelelekile wena, gqirha wabagulayo, ndiphilise zonke izifo zam zomzimba nezengqondo.
Coca umzimba wam kuko konke ukungcola, ususe konke okubi endinako emphefumlweni wam.
Thuthuzela umphefumlo wam nomzimba wam.
Ezi kunye nezinye zezinye zezibinzana apho umntu enze izicelo ezinkulu kuGqirha woMntwana.
Ukuba ufuna ukwazi malunga nemithandazo efana nale, siyakumema ukuba undwendwele Umthandazo Wokholo, ngokuqinisekileyo iyakunceda ukuba unciphise lonke ixhala onalo ngoku.